China CE Ukuvunywa 32A 7kw EV itshaja ngokukhawuleza Isithuthi soMbane soThutho soThutho loLuntu kunye ne-Ocpp1.6j Ukwenziwa kunye nefektri | Itekhnoloji edibeneyo
Siqinisekile ukuba ngemizamo edibeneyo, ishishini phakathi kwethu liya kusizisela izibonelelo ezifanayo. Sinokuqinisekisa ngento yakho ngexabiso eligqwesileyo nelineengcwangu kwithegi ye-OEM eChongiweyo ye-China CE Ukwamkelwa i-32A 7kw i-EV itshaja esheshayo Isitishi soThutho soMbane soLuntu kunye ne-Ocpp1.6j. sitsala abathengi ngexabiso elinoburharha kunye nenkonzo ekhethekileyo. Ngapha koko, kukunyaniseka nokunyaniseka kwethu, okusincedayo ukuba sisoloko sikhetha abathengi kuqala.
Egqithileyo Umgangatho ophezulu weNdlela 3 32A Isigaba esinye 3phase Isikhululo sokutshaja se-EV
Okulandelayo: Uhlobo lweSocket 2 32A 22kw Isigaba esithathu se-EV Ukutshaja iziBonelelo ze-EV kwitshaja yeZithuthi zombane
inkqubo yokutshaja imoto yombane
ev charger ekhaya
Ixabiso letshaja ye-Ev
iintlobo zezitishi zokutshaja ze-ev
Ishaja yeemoto zombane